Ubuchwepheshe bokupheka izitsha ezivela kumakhowe
Uma wazi izindawo ze-mushroom, ngisho noma zingekho ngisho nehlathi, kodwa isitolo noma imakethe, lungiselela izitsha zokuqala nalezi zipho zemvelo! Ubuchwepheshe bokupheka izitsha ezivela emakhowe yilokho okudingeka wonke umama womuzi adinga!
500 g wezinhlanzi
300 g we-sauerkraut
Ithebula eli-2. amafutha wezipuni zemifino
Ithebula eli-2. wezipuni utamatisi unamathele
20 g we anyanisi oluhlaza
Ithebula le-4. wezipuni of ukhilimu omuncu
4 ama-PC. i-peppercorns
Amakhowe abilayo ngamalitha amabili amanzi (cishe imizuzu engama-40). I-anyanisi igaya futhi gazinga emafutheni omifino (10 min). Bese uxuba utamatisi unamathisele bese ususa ekushiseni. Esikhathini epanini namakhowe ufake i-sauerkraut bese upheka imizuzu engu-20. Engeza u-anyanisi bese upheka elinye imizuzu engu-5-7. Ukhukhamba uthathe ama-cubes, ubeke isobho, engeza bay leaf, pepper bese upheka imizuzu engu-10. Isobho eliphelile elifafazwe anyanisi oluhlaza oshiyikile bese ushiya imizuzu engu-15, uvala isembozo.
Isikhathi sokupheka: 90 min.
Enye ekhonza u-155 kcal
Amaprotheni - 11 g, amafutha - 8 g
Gcina amakhowe esiqandisini, uzihlanganise kalula ephepheni (ukuthi umkhiqizo "uphefumule"). Njengephakheji, akumele usebenzise izikhwama zeplastiki - kuzo izipho zezinkuni ziba zishaya futhi zihlabe ngokushesha.
Isobho nge amakhowe
1 izimpande ze-celery
Iphadi elilodwa le-pepper elibomvu elibomvu
100 g welayisi
300 g amazambane
Amakhowe ukuhlunga bese ubilise ngamalitha amabili amanzi (cishe imizuzu engama-30). U-anyanisi uthathe amasongo amane, izaqathe, izimpande zesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi nezimpande zamapulisi amnandi - utshani. Imifino gazinga emafutheni omifino (5 imizuzu). Utamatisi ukugcwalisa ngamanzi abilayo, khipha, uginindle oqoshiwe. Yengeza imifino futhi gazinga eminye imizuzu emihlanu. Esikhathini umhluzi kanye amakhowe engeza irayisi, ukupheka imizuzu 7. Peel amazambane, uthathe izingcezu ezincane, efakwa umhluzi bese upheka imizuzu 10. Engeza imifino ethosiwe, i-pepper bell, i-bay leaf, usawoti bese upheka imizuzu emithathu.
Isikhathi sokupheka: iminithi engama-60.
Kwesinye isigaba 220 kcal
Amaprotheni - 14 g, amafutha - 12 g, ama-carbohydrates - 8 g
Borsch ngamakhowe nobhontshisi
300 g iklabishi
100 g webhontshisi omhlophe
200 g amakhowe
kuthebula eli-2. izinkezo zemafino yemifino kanye ne-tomato unamathisele
Ithebula eli-1. spoonful of uviniga
Amabhontshisi athulule amahora angu-12 Amakhompi abika ngamalitha amabili amanzi (30 imizuzu) bese uthatha imichilo. Ubilise ubhontshisi (imizuzu engu-20). I-grate isithombo sebhitrudi futhi gazinga ingxenye yebhotela. Engeza unamathisela utamatisi, uviniga, umhluzi omncane wamakhowe bese ubeka. I-carrot kanye no-anyanisi nquma bese ushaya emafutheni asele. Sika amazambane zibe cubes, iklabishi kuya utshani. Umhluzi we-mushroom ulethe ngamathumba, ufake amazambane kuwo, iklabishi uphinde upheke imizuzu engu-10. Engeza ubhontshisi kanye nemifino enolisiwe, emva kwemizuzu emihlanu - ama-beet asetshontshiwe, amakhowe futhi, uma ufisa, iminqumo. Isizini ukunambitha, ukukhonza nge ukhilimu omuncu.
Enye ekhonza 370 kcal
Amaprotheni - 21 g, amafutha-16 g, ama-carbohydrate-18 g
Isobho se-noodle ngamakhowe
200 g lama-noodle amaqanda
1.2 amalitha emhluzi wemifino
I-300 g yamagundane
Ithebula le-3. nezinkezo ze-soy sauce
50 g we-peas eluhlaza
100 g izaqathe
Isiqu esingu-1 anyanisi oluhlaza
1 ithisipuni. i-spoon ye-ginger echotshoziwe
I-noodle ibilise, phinda ku-colander bese usakazeka phezu kwamapuleti esobho. Thela umhluzi ngamathumba kanye no-1/4 kuwo ukuze uthule ama-noodle emaflethini. U-anyanisi uthathe amasongo amancane, amakhowe - ngamapuleti. Engeza u-anyanisi ngamafutha yemifino, engeza amakhowe bese ubeka ngaphandle. Isizini nge-sauce soy. I-carrot yinqunyiwe ibe tincetu, u-anyanisi ohlaza okwesibhakabhaka - izindandatho. Umhluzi osele uphinde ubilise bese ufaka amakhowe, i-ginger, i-peas kanye ne-izaqathe. Pheka imizuzu emibili. Umhluzi namakhowe uthele ama-noodle emaflethini. Khonza ngokufafaza ngamasongo anyanisi aluhlaza.
Isikhathi sokupheka: 40 iminithi.
Enye yokukhonza i-kcal 320
Amaprotheni-10 g, amafutha-amagremu angu-12, ama-carbohydrate-40 amagremu
Ukupheka kokulungiselela izitsha zentwasahlobo
Ukupheka: zokupheka, ukupheka izinhlanzi
Spread kusuka cranberries omisiwe kanye anyanisi spring
Amakhekhe ama-curd amnandi, ama-balls ne-vareniki kubantwana
Ukudla okumnandi okungabizi kwezivakashi
Ungadliwa ama-saladi nsuku zonke
Ungadliwa izitsha zase-Italiya Zonyaka Omusha
Needlework: i-mosaic ngezandla zakho
Ukuhlanza ubuso kumachashazi amnyama
I-pasta efanisiwe ne-turkey nama-mushroom
Izinwele ezinhle nezinempilo: zokupheka zezimoto ngaphandle kwama-sulfate ekhaya
I-Horoscope ngo-February 2018 - i-Lion ye-Lion - evela eTamara Globa no-Angela Pearl
Amakhekhe we-chocolate nge-walnuts
Amaphikishi e-Lent 2017 nsuku zonke (isithombe). Kudla ekuthunyelwe kwabantu abantu ngosuku: amasaladi, izitsha ezishisayo, izimpahla ezibhaka
Biography Imbewu ye Farada
Isitayela kusuka kuL kuya ku-XXL: izinto ezifakiwe ezenzelwe abesifazane abathandekayo
I-crickly cacti nama-succulent amnandi
Umusa ohlakaniphile: iqoqo likaJuni 12Storeez
I-Sauce nesitshalo seqanda se-pasta
I-pasta ne-rosemary sauce